Katikasi ye COVID-19: Rairo ku Vakristo Munguva Yekugozherwa – ChriSoNet.Com
Home » Blog » Katikasi ye COVID-19: Rairo ku Vakristo Munguva Yekugozherwa
Mumazwi ake ekuzivisa New City Catechism (Katikasi ye Guta Idzva), Kathy Keller anonyora kuti, Katikasi dzakanyorwa ne zvinangwa zvinodarika kuita zvitatu. Chinangwa chokutanga kubudisa tsanangudzo dzino nzwisisika dze vhangeri (guhu rakanaka)… Chinangwa chepiri chaiva chekugadzira tsanangudzo idzi dzitaure ku dzidziso dzenhema, mhosvo, kutenda kwenhema kwenguva idzodzo uye mutsika ne magariro. Chinangwa chetatu, chaiva chiine basa rehufudzi (hufundisi) ku umba vanhu vakashanangurwa, vanopikisa tsika nemagarario enguva yavo, asi vachiratidza kufanana na Kristo. Nyangwe zvazvo katikasi ino (ino tevera) yakati siyanei, inehukama ne mamwe makatikasi. Nokuti yakateyiwa nheyo dzayo mu vhangeri (guhu rakanaka), yavezva sechombo che kurwisa dzidziso dzenhema uye kuumba muzvokwadi mufungiro we kereke mumaererano hutachiwana hwe COVID-19.
Tags: articles, COVID19, Katikasi, Munguva, Rairo, stories, Vakristo, Yekugozherwa